Dry feta Plant, Dry blender Machine, Powder fonosana Machine - QuanHua
MAINA MIX RIHITRA SIMENITRA fototra
QH-30 Simple Type Dry Mix feta Plant, dia vao mainka marindrano (ampiharina ny ambany fototra), fampisehoana tsara indrindra, tsotra fandidiana, handrakotra ny faritra ny faritra kely, tsy ny asa tarika (2-3), ambony fitaovana fampifangaroana [.. ] Read More
Tile ADHESIVE mpanamboatra fototra
Tile adhesive orinasa mpamokatra entana fototra ampiasaina hamokarana kapila tanimanga tanimanga adhesive, filler, hafanana fampiasana rafitra fiarovana multiplexé adhesive rihitra, masonry rihitra [..] Read More
VONONA MIX sokay fototra
Vonona Mix sokay fototra no ampiasaina mba hamokarana ny kalitao avo sy ny tontolo iainana sy ny lalotra gypsum-tena leveling gypsum. Ny sokay gypsum no fototra leveling. Ny ara-nofo ny manta [..] Read More
Shandong QUANHUA IMPORT & FANONDRANANA ENTANA CO., LTD.
Quan Hua Group ny foibeny dia miorina ao Jinan, ny tanànan 'loharano, dia goavana fampidirana orinasa famokarana, fikarohana siantifika, varotra, fanafarana sy fanondranana varotra. Ny orinasa dia naorina teo an 2003. Ny adiresy dia Anqiu orinasa Shiquan Industrial Park, Weifang City, Shandong Province, mandrakotra ny faritra ny 200.000 metatra toradroa sy trano faritra 120.000 metatra toradroa, amin'ny mpiasa 300, izany ankehitriny sehatra fanorenana ny ankapobeny, ny indostria lehibe dia tena ny fanorenana milina, nameno ny fametrahana sy ny fanorenana.
Izahay, fa fampifangaroana vahaolana Providers
Amin'ny maha-mpitarika ny maina mpanamboatra Mix rihitra fototra sy ny fanorenana fitaovana milina ao Shina, isika dia manolo-tena ho amin'ny lohalaharana ny teknolojia sy ny fanavaozana sy ny fanatsarana hatrany ny faritra rehetra ny raharaham-barotra. Ny tetika dia manampy antsika hahazo toerana matanjaka eo amin'ny tsena iraisam-pirenena sy miantoka ny fitomboana maharitra. Quan Hua marika dia malaza ao amin'ny orinasa sy ny milina efa naondrana any Malezia, Vietnam, Rosia, Kazakhstan, Ozbekistan, Mongolia, Qatar, Alzeria, Ejipta sy ny firenena hafa. Efa nandresy ny fanohanana ny mpanjifa sy ny fahatokiana.
efa naondrana any
Sy ny taratasy fanamarinana ISO taona
Lavorary Rehefa-Sales Service
24-ora tserasera valin-na miantso indray
Iantrao ny faritra sy ny quick- anaovan'ireo faritra famatsian
Free-fiofanana ho an'ny ny mpandraharaha
Inona no maina rihitra?
1. kosa ny asa-toerana tafondro, rihitra maina antsoina koa hoe mialoha mifangaro feta, izay novokarin'ny ao amin'ny orinasa amin'ny toerana vita fanoloran-tena eo amin'ny batching sy ny mampifangaro ny sakafo ao amin'ny tena-maso dingana. Azo ampiasaina mivantana amin'ny fampidirana fotsiny ny rano ao amin'ny Joba toerana.
2. Manana toetra tombony ny tapaka, maso lisitra, fahavaratra ny fotoana sy ny vola lany ny asa. Amin'ny alalan'ny fanampiana isan-karazany additives simika, manana fananana tsara ny fatorana, mafana sy Acoustic insulation, hanenjika-fanoherana, workability, rano-fihazonana, mitafy-porofo, anti-harafesiny, sns
3. Dry rihitra afaka mitovy karazana fitaovana fanorenana vaovao amin'ny alalan'ny fanatsarana rijan. Ireo fananana tsara tsy vitan'ny hoe manatsara ny kalitaon'ny trano sy ny fiainana be dia be, fa mihena ihany koa ny fampiasana ny feta ao amin'ny ambaratonga lehibe.
4. Ny fangatahana ho an'ny maina rihitra nitombo haingana noho ny tena mahamendri-balisoa mampitaha ny adala amin'ny asa feta-toerana.
Raha te-hanao maina feta fototra ao amin'ny orinasa, ny QuanHua Mixer Team midadasika dia hampiasa ny fahaizany sy ny fahalalana ara-teknika hanao ny mari-end mitondra zava-baovao aloha injeniera ny Dry Mix Industries rihitra.
Ny tena za-draharaha injeniera manome maina Mix fototra famolavolana, hanomboka-up fanohanana, Fanamboarana, fampiofanana, fanehoan-kevitra faharoa hevitra sy revamp tolotra izay hampitombo ny maina Mix rihitra fototra fahafahana. Raha toa ianao ka vonona ny hianatra bebe kokoa momba ny asa isika, dia vonona ny hanampy anao amin'ny famolavolana ny fepetra takiana.
Isika manolo-tena hanome vahaolana mahomby vidiny sy ny kalitao ny vokatra haingana amin'ny tena nanova ny fiainako. Isika dia iray amin'ireo vitsy izay mahatakatra ny toetra sy ny zavatra takiana ny fanaterana an-toerana sy iraisam-pirenena ny mpanjifa. Dry rihitra zavamaniry dia natao tao an-tsain'i fitandremana Mix maina rihitra fototra mpiantoka fiandrasana ny fampiasam-bola.
FANAOVANA SY FANDINIHANA
QuanHua Mixer Fitaovana Machine Factory manarona faritra iray ny 200.000 metatra toradroa sy trano faritra 120.000 metatra toradroa, amin'ny 300 mpiasa matihanina. Milina fanamboarana fitaovana rehetra araka ny ISO9001 sy AK fitsipika. Rehefa avy vokarina, ny milina dia hotsapaina hentitra tsara mandra-mihazakazaka.
Ny milina nahazo nandalo ny SGS fandinihana sy ny olon-kafa, ka ny lafiny mety manaova fotoana mba hanao fandinihana alohan'ny fanondranana.
Fa iray napetraka ny maina rihitra fototra, raha tsy mitaky ny maotera Siemens ary mitaky ny 2 volana ny fotoana famokarana, hafa rehetra mampiasa milina famokarana 30-45 andro ny fotoana.
Amin'ny maha-mpitarika maneran ao amin'ny orinasa, dia manolotra fanompoana mpanjifa feno fonosana ary mety hanaiky turnkey tetikasa ho an'ny mpanjifa. Manome tanteraka isika fametrahana sy ny fanorenana asa ho an'ny rehetra izahay, mpanamboatra fitaovana sy manome. Ny tena za-draharaha matihanina sy saha installers ny hanao izay hahafa-po ny mpanjifa 'sarotiny indrindra fepetra.
Ny asa fametrahana indray anisan'izany ny fametrahana & fampifanarahana, fanarenana sy fanovana, manamboatra & indray fametrahana tolotra. Fahaiza-manao dia ahitana rafitra planina, fitaovana toerana, fitaovana mampihetsi-po, rafitra manomboka ny & naniraka & tetikasa fitantanana & isan-karazany isaky ny fitaovana hafa voalaza fepetra.
MAINA RIHITRA SIMENITRA
Wall Putty mifangaro Machine, Dry Powder blender Mixer, Automatic Dry rihitra Plant, Dry rihitra mifanerasera Machine Miaraka hangalana Coat , Dry Powder Mixer Machine , Ldh miasa Mixer Machine ,